Europe နဲ့ CIS အကောငျးဆုံးအသငျးတှပေါဝငျမယျ့ WePlay! Pushka Dota2 League – Gaming Noodle
2020 ခုနှဈအတှငျး အတိုးတကျဆုံး Dota2 ပွိုငျပှဲ စီစဉျသူ (Organizer) လို့တောငျ သတျမှတျနိုငျတဲ့ WePlay! ကတော့ နောကျထပျပွိုငျပှဲတဈပှဲ ကွညောလိုကျပါပွီ။ ဒီတဈကတော့ Dota2 League ပွိုငျပှဲဖွဈပွီး ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံးအသငျးတှေ ပါဝငျကွမှာပါ။
WePlay! ဆိုတာ ယူကရိနျးအခွစေိုကျ Esports ပှဲစီစဉျသူ အဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈပွီး ၂၀၂၀ ခုနှဈထဲမှာပဲ ဒုတိယ DPC Minor ဖွဈတဲ့ WePlay! Bukovel Minor, ဆုကွေးဒျေါလာ ၃၀၀,၀၀၀ ပေးအပျခဲ့တဲ့ WePlay! Mad Moon, COVID-19 တိုကျဖကျြရေးအတှကျ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ ဆုကွေးဒျေါလာ ၁၂၀,၀၀၀ တနျ WeSave! Charity Play! စတဲ့ပွိုငျပှဲတှကေို စီစဉျခဲ့ပါတယျ။ ဒီတဈခါ WePlay! Pushka Dota2 League ကတော့ အောကျပါအတိုငျး ဥရောပက အကောငျးဆုံး ၆ သငျးနဲ့ CIS ၆ သငျး တို့ကို ဖိတျချေါထားပွီး ကနျြတဈသငျးစီကတော့ လကျရညျစဈပှဲမှ အနိုငျရရှိတဲ့တဈသငျးစီ ပါဝငျမှာပါ။
Open Qualifier မှတဈသငျး
Two Time TI Champion OG will participate
ပွိုငျပှဲကိုတော့ CIS (၇)သငျးတဈအုပျစု Europe (၇) သငျးတဈအုပျစုစီ Bo3 ပါတျလညျ ယှဉျပွိုငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ အုပျစုအောကျဆုံး (၃) သငျးစီက ထှကျရမှာဖွဈပွီး ကနျြ (၄)သငျးက Double Elimination Format နဲ Bo3 ယှဉျပွိုငျကွမှာဖွဈပွီး Grand Final ကတော့ Bo5 ဖွဈပါတယျ။
ပွိုငျပှဲကိုတော့ ဧပွီ ၂၃ ရကျနမှေ့ာ စတငျမှာဖွဈပွီး ပှဲစဉျအားလုံးကို Online ကပဲယှဉျပွိုငျကွမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဆုကွေးကတော့ ဒျေါလာ ၂၅၀,၀၀၀ ပေးအပျမှာဖွဈပွီး Open Qualifier အခကျြအလကျတှကေိုတော့ တရားဝငျမကွညောသေးပါဘူး။
COVID-19 ကပျရောဂါကွောငျ့ အိမျတှငျးပုနျးနရေခြိနျတှမှော အခုလို Esports ပွိုငျပှဲတှေ စဉျဆကျမပကျြရှိနတောကတော့ ဂိမျမာတှအေတှကျ သတငျးကောငျးပါပဲ။ COVID-19 ဖွဈပှားနပေမေယျ့လညျး Gaming Noodle ကနေ သတငျးတှနေဲ့ အခွားစိတျဝငျစားဖှယျရာ အကွောငျးအရာအသဈတှကေို တငျဆကျပေးသှားဦးမှာမလို့ စောငျ့မြှျောကွညျ့ရှုပေးကွပါ ခငျဗြာ။
Europe နဲ့ CIS အကောင်းဆုံးအသင်းတွေပါဝင်မယ့် WePlay! Pushka Dota2 League
2020 ခုနှစ်အတွင်း အတိုးတက်ဆုံး Dota2 ပြိုင်ပွဲ စီစဉ်သူ (Organizer) လို့တောင် သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ WePlay! ကတော့ နောက်ထပ်ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲ ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ ဒီတစ်ကတော့ Dota2 League ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအသင်းတွေ ပါဝင်ကြမှာပါ။
WePlay! ဆိုတာ ယူကရိန်းအခြေစိုက် Esports ပွဲစီစဉ်သူ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်ထဲမှာပဲ ဒုတိယ DPC Minor ဖြစ်တဲ့ WePlay! Bukovel Minor, ဆုကြေးဒေါ်လာ ၃၀၀,၀၀၀ ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ WePlay! Mad Moon, COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆုကြေးဒေါ်လာ ၁၂၀,၀၀၀ တန် WeSave! Charity Play! စတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကို စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါ WePlay! Pushka Dota2 League ကတော့ အောက်ပါအတိုင်း ဥရောပက အကောင်းဆုံး ၆ သင်းနဲ့ CIS ၆ သင်း တို့ကို ဖိတ်ခေါ်ထားပြီး ကျန်တစ်သင်းစီကတော့ လက်ရည်စစ်ပွဲမှ အနိုင်ရရှိတဲ့တစ်သင်းစီ ပါဝင်မှာပါ။
Open Qualifier မှတစ်သင်း
ပြိုင်ပွဲကိုတော့ CIS (၇)သင်းတစ်အုပ်စု Europe (၇) သင်းတစ်အုပ်စုစီ Bo3 ပါတ်လည် ယှဉ်ပြိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်စုအောက်ဆုံး (၃) သင်းစီက ထွက်ရမှာဖြစ်ပြီး ကျန် (၄)သင်းက Double Elimination Format နဲ Bo3 ယှဉ်ပြိုင်ကြမှာဖြစ်ပြီး Grand Final ကတော့ Bo5 ဖြစ်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲကိုတော့ ဧပြီ ၂၃ ရက်နေ့မှာ စတင်မှာဖြစ်ပြီး ပွဲစဉ်အားလုံးကို Online ကပဲယှဉ်ပြိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုကြေးကတော့ ဒေါ်လာ ၂၅၀,၀၀၀ ပေးအပ်မှာဖြစ်ပြီး Open Qualifier အချက်အလက်တွေကိုတော့ တရားဝင်မကြေညာသေးပါဘူး။
COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် အိမ်တွင်းပုန်းနေရချိန်တွေမှာ အခုလို Esports ပြိုင်ပွဲတွေ စဉ်ဆက်မပျက်ရှိနေတာကတော့ ဂိမ်မာတွေအတွက် သတင်းကောင်းပါပဲ။ COVID-19 ဖြစ်ပွားနေပေမယ့်လည်း Gaming Noodle ကနေ သတင်းတွေနဲ့ အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ အကြောင်းအရာအသစ်တွေကို တင်ဆက်ပေးသွားဦးမှာမလို့ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါ ခင်ဗျာ။